သွားပွတ်ကြိုးသုံးဖန်များရင် သွားကျဲမှာလား . . . – Healthy Life Journal
မေး. ကျွန်တော်က အသက် ၆၀ ကျော် သက်ကြီးရွယ်အိုဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲရှိတဲ့ အောက်ဖက်က သွားတွေဟာ အစာစားပြီးတိုင်း သွားကြားထဲအစာညပ်လေ့ရှိလို့ သွားပွတ်ကြိုးသုံးပြီး အစာထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအခါ သွားပွတ်ကြိုးသုံးဖန်များလာရင် သွားတစ်ချောင်း၊ နှစ်ချောင်းကျဲလာမှာလား၊ သွားပွတ်ကြိုးအစား သွားပွတ်တံနဲ့ သွားတိုက်ပေးရမှာလား။ ဘယ်လိုနည်းသုံးရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာလဲ။
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင်(မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။
ဖြေ. သွားကြားပွတ်ကြိုးသုံးဖန်များရင် သွားမကျဲပါဘူး။ သွားပွတ်ကြိုးနဲ့ အစာထုတ်တာက သွားဖုံးတွေအပေါ်အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ သွားပွတ်ကြိုးမှာ ဖယောင်းလေးတွေ သုတ်ထားလေ့ရှိတဲ့အတွက် ချောချောမောမောရှိသလို ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့လည်း ရှိပါတယ်။ အစာကပ်ငြိမှုများပြီး ခံတွင်းသန့်ချင်ရင်တော့ သွားပွတ်ကြိုးသုံးပြီးရင် သွားတိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Related Items:Dental, Dental Care, tooth, Tooth Care